I-akhawunti ye-Binance ikhiyiwe ngezimali? Izinto ezi-2 okufanele zenziwe - BitExchange Systems Helpdesk
I-akhawunti ye-Binance ikhiyiwe ngezimali? Izinto ezi-2 okufanele zenziwe
Kungokuhlangenwe nakho okudumazayo ukuthola i-akhawunti yakho yeBinance ikhiyiwe ngezimali ngaphakathi. Kuyakhathaza kakhulu futhi lapho kungekho mpendulo evela ekusekelweni kweBinance futhi uqhubeka nokuthola impendulo efanayo kaninginingi. Kube nezindaba ezikhathazayo ezivela kubasebenzisi abathintekile ezinkundleni zokuxhumana abathi i-akhawunti yabo yeBinance ivinjelwe ngaphandle kwempendulo ecacile evela ekusekelweni kwamakhasimende. Kulesi sihloko ake sibheke izinto ezimbili ezibalulekile okufanele uzenze ngemuva kokumiswa kwe-akhawunti yakho yeBinance.
(1) Yenza ingxenye yakho. Xhumana noBinance.
Isinyathelo sokuqala njalo ukuzama indlela elula ie. xhumana noBinance. Kwazi bani, lesi sinyathelo esilula singathola ukuthi i-akhawunti yakho ye-Binance isebenze futhi. Ngemuva kwezikhalazo eziningi zakamuva ku-inthanethi, uBinance udale inqubo yamakhasimende ukuvula ama-akhawunti awo. Sebenzisa lesi sixhumanisi esinikezwe yiBinance bese ulandela izinyathelo. Kwezinye izimo, lokhu kuyasebenza.
Okubalulekile: Ngenkathi uphelelwe yithemba futhi ukhungathekile ukuthi i-akhawunti yakho yeBinance ivinjelwe, sicela ukhumbule njalo: UNGALOKOTHI unikeze iphasiwedi yakho noma ukhiye wangasese njll kunoma ngubani. Uma noma ngubani kunoma yisiphi isiteshi ekucela - kungumkhonyovu.
(2) ukumelwa kweqembu lesithathu.
Kufana nemfihlo efihliwe kuyo yonke inkampani emhlabeni jikelele. Ukunakwa okukhethekile kunikezwa abasebenzisi abamelwa ngenye inkampani yobuchwepheshe. Uma uzizwa ukuthi i-akhawunti yakho ye-Binance ayisabuyiswa ngemuva kokuxhumana neBinance noma uma kukhona ukubambezeleka ekuphenduleni, zama lokhu. Thatha usizo lwenkampani ethi 'Representation' ukuthumela uBinance isaziso egameni lakho efuna impendulo (Cha, lokhu akusona isaziso esisemthethweni). Kunezinhlangano ezithile ezizothumela imeyili ekusekelweni kwamakhasimende akwaBinance esikhundleni sakho zifuna ubulungiswa. Bazokumela futhi bafune impendulo. Ukumelwa okunjalo kungakhuphuka ngaphakathi komnyango wokuxhaswa kwamakhasimende. Futhi ubenze babone icala lakho futhi baphendule ngokushesha. I-imeyili evela ezinkampanini ezimele lezo ithwala ukungabi namandla okuthile futhi isize ukuthi icala lakho liqashelwe. I-Crypto Support Org. ingenye yenkampani enjalo ongazama ukuxhumana nayo. Bazolilalela udaba lwakho futhi uma luyiqiniso bazolungisa idokhumenti enemininingwane. Ungaqinisekisa okuqukethwe yidokhumenti ngaphambi kokuthi bayithumele (uzobe uyi-CC'd ku-imeyili). Sizwile ukuthi abaningi bathole izimpendulo ezisheshayo ngemuva kokumelwa. Ezinye izinkampani nazo zisiza ekukhuliseni inkinga yakho igxathu negxathu. Uma kungasekho mpendulo, baxhumana nokuxhaswa kweBinance kuziteshi eziyimfihlo ze-Twitter. Uma kungakabikho mpendulo, bayavula ukumaka ezinkundleni zokuxhumana befuna impendulo. Uma namanje kungekho mpendulo efanele bakuphakamisa izinyathelo ezilandelayo zokukhuphuka. Njengoba bekhuphukela kokulandelayo, amazinga alandelayo… ayikho enye indlela yeBinance ngaphandle kokuxazulula inkinga.
Yiziphi izizathu ezivamile zokuvalwa kwe-Akhawunti ye-Binance?
Ngenkathi kungaba nezizathu eziningi, izizathu ezi-3 eziphezulu esicabanga ukuthi yilezi:
Ezokuphepha: Izikhathi eziningi isizathu lapho kutholakala khona usongo lwezokuphepha ku-akhawunti yakho. Uma uhlelo luthola eminye imizamo eqhubekayo yokugenca i-akhawunti yakho, ikhiya leyo akhawunti ye-Binance ngokuzenzekelayo ukuvikela i-akhawunti yakho ngokuphepha. Uma kunjalo, ikakhulukazi i-akhawunti yakho ye-Binance ingabuyiswa ngokulandela izinyathelo ezinconywe nguBinance (njengoba kushiwo ephuzwini lokuqala kule ndatshana)
Ukuqinisekisa: Kungenzeka futhi kwesinye isikhathi ukuthi unganikanga ukuqinisekiswa okufanele kwe-ID, noma okuphelelwe yisikhathi. Futhi ngokususelwa kumthetho wezwe, iBinance ingadinga ukuphinda iqinisekise i-akhawunti yakho. Lokhu kungavala i-akhawunti yakho futhi imiswe kuze kube unikeza imininingwane edingekayo.
Ukuphoqelelwa komthetho: Noma iyiphi inkampani emhlabeni izodinga ukulandela ama-oda aqhamuka ngqo kwabomthetho. I-akhawunti yakho ingaqandeka uma ngabe icelwe ukuthi ikhiywe yizinhlangano zikahulumeni.
Kungani kukhona ukubambezeleka okungaka ekuphenduleni okuvela kuBanance Support?
Yebo, lokhu kungaba yinto ekhathazayo. Ikakhulukazi lapho izimali zakho zikhiyiwe ku-akhawunti yakho ye-Binance futhi kungekho mpendulo efike ngesikhathi. Udinga futhi ukuqonda ukuthi iBinance ingukushintshiselana nge-cryptocurrency yomhlaba wonke nezigidi zabasebenzisi. Futhi kuzoba njalo umthamo wamathikithi osizo abawathola nsuku zonke. Cabanga nje ukulandela isicelo ngasinye nezingodo zangemuva. Uma ingakwazi ukuzenzekelayo, ama-backlogs anganqwabelana ngokushesha. Lokhu kungaba isizathu esiyinhloko sokubambezeleka. Futhi nakanjani akulungile. Enye yezindlela zokududula ukunakwa kokwesekwa kwamakhasimende ecaleni lakho uma usebenzisa isethulo (njengoba kushiwo ngenhla ephuzwini 2)